GEN GABRE oo xilkii uu ka haayay xafiiska IGAD ee Soomaaliya laga qaaday, Waa maxay sababta uu xilka looga qaaday? | Newsomali
GEN GABRE oo xilkii uu ka haayay xafiiska IGAD ee Soomaaliya laga qaaday, Waa maxay sababta uu xilka looga qaaday?
Ninka Itoobiyanka ah ee saameynta ku yeeshay Siyaasadda Soomaaliya Gen Gabre ayaa laga qaaday xilkii uu ka haayay xafiiska IGAD ee Soomaaliya kadib dib u habeyn lagu sameeyay ergada IGAD u qaabilsan Soomaaliya.
Warkan ayaa soo baxay markii Ra’iisal wasaare Xasan Cali Kheyre ee Adis ababa oo uu kaga qeyb galay shir madaxeedkii IGAD, iyadoo dowladda Soomaaliya ay tan bedelkeed ku weysay in ergey Jabuutiyaan loo magacaabo wakiilka IGAD ee Soomaaliya.
Magaca Gen Gabre ayaa soo shaac baxay markii Ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya 2006 dii xilligaas oo meesha ka saaray awoodii kooxihii islaamiyiinta soomaaliya.
Gen Gabre ayaa loo heystaa inuu galay dembiyo ay ka mid yihiin dadkii ay Itoobiyaanka ku laayeen caasimadda Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya si rasmi ah warkan uma cadeynin